Isikhokelo sokuGqibela kwi-Garlic Extract yokuLawula uMzimba
Matshi 9, 2020
Igarlic kudala isetyenziselwa ukunyanga izifo ezahlukeneyo kwaye isayensi yale mihla iqinisekisile uninzi lwezibonelelo zayo zempilo. Le mithi ngokwenyani yeentlobo ze-anyanisi kwaye ikwanxulumene neechives kunye neekalika. Ivela eSiberia kodwa kamva, iye yasasazeka nakwezinye iindawo zomhlaba.
Isicatshulwa segalikhi kuthiwa iyasebenza ekunyangeni izifo zentliziyo kwaye inokulawula ngokuchanekileyo uxinzelelo lwegazi. Inokunyanga nokuqina kwemithambo, imeko eyaziwa ngokuba yi-atherosclerosis. Ngaphezu kwako konke, igarlic iyasebenza ekuncedeni umntu ukunciphisa umzimba.
Igarlic ayisebenzi kuphela kwicandelo lezonyango. Kukwaluncedo kakhulu ukulungiselela ukutya okumnandi kunye neziselo. Le imifuno sisithako esidumileyo kwiitayile ezahlukeneyo emhlabeni kwaye ihlala isenziwa kwioyile yegalikhi, kumgubo wegalikhi, kunye nokunye.
Kufunyenwe ukuba ivelise imichiza eyaziwa ngokuba yi-allicin. Le yikhompyuter yecandelo legalikhi elinoxanduva lokuvelisa ivumba lonyango kunye nokuphilisa uluhlu olubanzi lweemeko zonyango. Kukho iimveliso ezisekwe kwigalikhi ezenziwa zangadanga ngenkqubo yokwaluphala.
Nangona kunjalo, ukuguga iigalikhi kunokwenza ukuba kungasebenzi kakuhle. Isenokuba licebo elihle ukukhetha izongezelelo zegalikhi ezigqityiweyo mathumbu endaweni yesisu.
1. Ngaba isetyenziselwa isigxina se Garlic?
Ke, yintoni eyenza ukuba igalikhi isebenze kangaka? Njengoko sele kukhankanyiwe, iyi-allicin enoxanduva lokwenza igalikhi liphumelele kunyango olubanzi lweemeko zonyango.
Izongezelelo zegalikhi kunye namayeza ane-allicin kuzo ezokusebenzela ukunyanga izifo zakho.
2. Sebenzisa igalikhi
Apha ngezantsi kukho ezahlukeneyo Sebenzisa igalikhi kwicandelo lezonyango.
Iphatha isifo seswekile
Igalikhi ifunyenwe ukuba ithobeke ngokuthobeka ukunyuka kwangaphambili kwesidlo sangaphambi kwesifo segazi phakathi kwabantu abanesifo seswekile kunye nabo bangenayo imeko.
Kufunyenwe ukuba kusebenza kakhulu kwizigulana ezinesifo seswekile, ngakumbi xa zithathwa iinyanga ezintathu zilandelelana. Nangona kunjalo, akwaziwa ukuba igarlic inokunciphisa ishukela egazini emva kokutya.
Njengoko sisaluphala, imithambo yethu ayisenako ukusolula. Kodwa igarlic inakho ukunqanda oku ukuba kungenzeki. Ukuba uthatha isongezelelo somgubo wegalikhi njenge-Allicor, i-INAT-Farma, kabini ngosuku kwiinyanga ezingama-24 ngokulandelelana, uya kuba nakho ukunciphisa ubunzima beethambo.
Izifundo zibonakalisa ukuba ukuthatha imithamo ephezulu yale mveliso kuya kuba luncedo ngakumbi kwabasetyhini kunamadoda kwiminyaka emi-4. Uphando lwenziwe kwezinye iimveliso ezisekwe kwigalikhi ezinezinye izithako ngokunjalo. Oku kube neziphumo ezilungileyo.
Unokunyanga umhlaza we-Prostate
Kuphononongo olwenziwe kwiqela lamadoda avela e-China abatya i-clove yegalikhi yonke imihla, kwafunyaniswa ukuba umngcipheko wabo wokufumana umhlaza we-Prostate uyehla. Ngapha koko, uphando lwabemi lubonakalisile ukuba ukutya igarlic kunokunceda ukunciphisa umngcipheko wokuba nomhlaza wesibindi.
Nangona kunjalo, olunye uphando olwenziwe kwiqela lamadoda avela e-Iran lubonisa ukuba ukusela igalikhi akuchaphazeli umngcipheko womhlaza webele. Uphando lwakwangoko licebisile ukuba ukutya ukutya okongeziweyo kwenziwe kunye Ukukhupha igalikhi inokunceda ukunciphisa umngcipheko wokuba nomhlaza we-Prostate ngelixa unciphisa iimpawu ezinxulumene nayo.
Inqanaba eliphantsi leCholesterol
Nangona lungelulo lonke uphando olunokuvuma, nangona kunjalo, obunye ubungqina obuqinisekileyo bucebisa ukuba ukusebenzisa igalikhi kunokunceda ukunciphisa inqanaba le-cholesterol yomzimba kunye ne-LDL okanye i-cholesterol embi kubantu abaphethwe yi-hyperlipidemia.
I-Garlic ifunyenwe isebenza ngakumbi nangakumbi xa ithathwa imihla ngemihla kwiiveki ezisibhozo ezilandelelanayo. Kodwa ukusebenzisa igarlic akuyi kukhulisa i-cholesterol elungileyo okanye i-HDL. Ayizukuphinda inqande amanqatha egazini eyaziwa ngokuba yi-triglycerides.
Ukulinganisa uxinzelelo lwegazi oluphezulu
Kufunyaniswe ukuba ukuthatha igalikhi ngomlomo kunokunceda ukunciphisa uxinzelelo lwegazi lwe-systolic ukuya kuthi ga kwi-7 ukuya kwi-9 mmHg kunye noxinzelelo lwegazi lokujikeleza ukuya kuthi ga kwi-4 ukuya kwi-6 mmHg kwabo baneengxaki zoxinzelelo lwegazi.
Iphatha unyawo lwe-Athlete
Ijeli equkethe i-ajoene iyasebenza nasekunyangeni unyawo luka-Athlete. Ngapha koko, ijeli ene-1% ye-ajoene ifunyenwe isebenza ngokunyanga kunyawo lweimbaleki. Kuthiwa isebenza kakuhle njengeLamisil, iyeza elaziwayo elisetyenziselwa ukunyanga unyawo luka-Athlete.
Uthintelo lokukhonkxa izilwanyana
Izifundo zibonakalisa ukuba abantu abatye inani elikhulu legalikhi kwisithuba seeveki ezisi-8 banenombolo ephantsi yokuluma. Nangona kunjalo, okwangoku akukaziwa ukuba igalikhi iza kuhamba njani xa ithelekiswa nezentengiso zentengiso.
Ukufaka ijeli equkethe i-0.6% ye-ajoene, ikhompawundi ukusuka kwigalikhi ngeveki, kabini ngemini, inokunyanga ngokufanelekileyo i-ringworm. Oku kuyafana nokubhalwa kwe-jock itch okanye i-tinea cruris. Ukunyanga i-itch ngejeli equkethe i-ajoene kunokunceda ukunyanga le meko.
3. Isibonelelo seGarlic
Apha ngezantsi ziphambili Isibonelelo seGarlic:
Iza kunye nePropent Medically Properties
Njengoko sele kukhankanyiwe, igalikhi luhlobo lwemifuno eyintsapho ye-anyanisi. Sisalamane esisondeleyo see-leeks kunye ne-shallots. Lonke icandelo lebhalbhu yegalikhi libizwa ngokuba yicalave.
Ngokubanzi, ibhalbhu enye yegalikhi inee-10 okanye ezingama-20 ii-clove. I-Garlic ngoku ifumaneka ngokulula kwiindawo ezahlukeneyo zomhlaba. Yenye yezona zithako ziphambili kwizidlo ezityiwayo ezahlukeneyo ngenxa yokunambitheka kwayo okumnandi kunye nevumba elinamandla.
Kuyo yonke imbali, ukusetyenziswa kwegalikhi ikakhulu kwicandelo lezonyango. Ibhalwe kakuhle yimpucuko eyahlukeneyo kubandakanya amaGrikhi, amaTshayina, amaJiphutha namaRoma.
Iinzululwazi ziyazi ukuba uninzi lweoncedo lwegalikhi lubangelwa kukubakho komxube wesalfure oya kuthi uveliswe emva kokuba i-clove ichotshoziwe. Eyona nto idume kakhulu kuzo zonke yi-allicin. Kodwa i-allicin ngandlel ithile ingazinzanga kwaye inokufunyanwa kuphela emva kokusikwa okanye ngokutyumza igalikhi entsha.
Kwizifundo ezenziwe kwiityhubhu zovavanyo, kubonakala ngathi igarlic inokubulala iiseli zomhlaza. Ngokophando lwe-Iowa Health yabaseTyhini, ebandakanya oomama abangama-41,000 ababhinqileyo abebesitya igalikhi rhoqo, kunye neziqhamo kunye nemifuno, umngcipheko wabo wokufumana umhlaza wekoloni wehle waya kutsho kuma-35%.
Izifundo zibonisa ukuba ioyile yegalikhi ingasetyenziswa njengendawo yokuthintela ukosuleleka. Ukuba unesifo esibuhlungu okanye imisipha kunye namalungu adibeneyo, zithambise ngeoyile kwaye kuya kufuneka ufumane isiqabu.
Iphucula impilo yeentliziyo
Ayikacaci nokuba igarlic iyasebenza nyani na ekuphuculeni inqanaba lomntu we-cholesterol, nangona kunjalo, uphando lubonisa ukuba inokuba nefuthe elihle kuxinzelelo lwegazi kunye nemithambo yegazi. Abaphandi bakholelwa ukuba iiseli ezibomvu zegazi zinokuguqula isalfure ibe yigesi ye-hydrogen sulfide, eya kuthi yandise imithambo yegazi, ikwenze kube lula ukulawula inqanaba loxinzelelo lwegazi.
Abaphandi bakholelwa ukuba iiseli ezibomvu zegazi zinokuguqula isalfure ibe yigesi ye-hydrogen sulfide enokwandisa imithambo yegazi, nto leyo eyenza kube lula ukulawula inqanaba loxinzelelo lwegazi.
Ikhomishini yaseJamani esebenza ngendlela efanayo ne-US Food and Drug Administration iyacebisa ukuba kuthathe okungenani iigram ezi-4 zegalikhi yonke imihla. Oku kufana ne-clove yegalikhi enkulu. Ukwenza njalo kunokunciphisa umngcipheko wakho wokuhlaselwa zizifo zentliziyo.
Ukuphucula iinwele kunye nolusu
Iipropathi ezichasene ne-antibacterial kunye ne-antioxidant kwigalikhi zinokukunceda ukuba zikunike isikhumba esicacileyo ngokubulala intsholongwane enoxanduva lwamabala.
Olunye uphando lubonisa ukuba ukurabha isixa esincinci segalikhi ekrwada kwiimpimpi kunokunceda ukuzishenxisa kude. Kodwa qaphela ukuba ukwenza oku kunokubangela imbonakalo evuthayo abanye abantu abanokuthi bangakhululeki.
Iipropathi ezichasene ne-antibacterial ezifumaneka kwigalikhi entsha zisebenza ngokubulala iibacteria ezinokubangela ityhefu yokutya enjenge-E.coli kunye ne-salmonella. Nangona kunjalo, akucetyiswa ukuba usebenzise igalikhi njengendawo yokucoceka kokutya.
Isisombululo esifanelekileyo seenyawo zeenyawo
Iigalikhi zinokulwa ngempumelelo nefungi. Ukuba ubhekene nonyawo lwe-Athlete, gxobhoza iinyawo zakho emanzini egalikhi. Unokuyihlikihla iigalikhi eluhlaza ngqo ezinyaweni zakho ukubulala le ntsholongwane ibangela ukuhlehla kunyawo lwakho.
4. Idosi yokuthintela igalikhi
Uninzi lwezifundo licebisa ukuba igalikhi ikhuphe idosi malunga ne-600 ukuya kwi-1,200 mg ngemini kwaye ihlala yahluleke kwiidosi ezininzi. Ukuze igalikhi ikhuphe isebenze, ubuncinci bethamo elifunekayo li-clove enye yegalikhi. Kufuneka ithathwe ngokutya amaxesha ama-2 ukuya kwangama-3 ngosuku.
Igarlic eyalupheleyo ixhaphake kakhulu xa kufikwa kwisongezelelo, njengoko ingenalo ivumba legalikhi abantu abalithiyileyo. Kukwacetyiswa ukuba utye igalikhi ngqo kukutya nangona ivumba elomeleleyo linokubeka kude.
Ayisiyongcinga ilungileyo ukubeka igalikhi kwi-microwave njengoko inokutshabalalisa ngokuyinxenye izinto eziluhlaza zemifuno. Nangona kunjalo, ukubhula kunye nokugaya iigalikhi kufanelekile, kuba ayizukuyonakalisa i-Biology kuyo, ixesha elide njengoko ichotshoziwe okanye isikiwe.
Akucetyiswa nokuba usebenzise igalikhi kwiidosi eziphezulu kuba oku kunokuba yityhefu. Ukudityaniswa kwegalikhi akufuneki kudlule kwiipesenti ezi-5 zokutya kwakho.
Eli lelona litha liphezulu lincomekayo elisuselwe kubunzima bomntu:
17 g - 150lb umntu
7 g - 200lb umntu
4 g - 250lb umntu
5. Ukusetyenziswa kwegalikhi yokulahla ubunzima
I-Garlic iza nezibonelelo ezininzi zezempilo kodwa esinye sezona sibonelelo zayo zikhulu kukunceda umntu ukuba anciphise umzimba. Kodwa i igarlic ekhupha ukunciphisa umzimba kuya kuxhomekeka kwindlela oyisebenzisa ngayo. Ukusebenza kwayo nako kuya kuxhomekeka kwindlela eyenziwa kwaye ilungiswa ngayo.
Igalikhi inokunceda ukonyusa amanqanaba amandla omntu. Ingakunceda ukutshisa ngokufanelekileyo iikhalori ngelixa ugcina ubunzima bomzimba. Ngapha koko, yinto yokudambisa ukutya kwaye iya kukugcina ugcwele ixesha elide, okuthintela ukungondleki.
6. Ukusetyenziswa kwegalikhi ukukhusela ulusu
Xa usebenzisa igarlic ekhupha ulusu, unokuxhamla kwii-antioxidants zayo ezinamandla. Ikwanepropathi ye-antimicrobial enokwenza izimangaliso zolusu lwakho.
Ukuguga kwesikhumba kuhlala kubangelwa luxinzelelo, ukuvuvukala, indlela yokuphila engenampilo, kunye nemfuza. I-S-allyl cysteine, ikhompawundi esuka kwigalikhi, inokunceda ukukhusela ulusu lwakho ekuqhekekeni nakwonakaliso lwe-UV.
Iipropathi ezichasene nokuvuvukala kunye ne-antioxidants kwigalikhi zinokukunceda ukunciphisa i-oxygen radicals ezinokunciphisa uxinzelelo.
7. Isicatshulwa segalikhi siyathengiswa
Njengokuba unikwe izibonelelo ezininzi zegalikhi, lixesha lokuba wongeze umzimba wakho ngale mfuno imangalisayo. Ungathenga izongezelelo zegalikhi naphi na kwezi ntsuku.
Ngapha koko, ukukhangela okulula kwe Ukukhupha igalikhi iyathengiswa kwi-intanethi iya kukhokelela kwiitoni zeziphumo. Kodwa ukuze ufumane okungaphezulu kwezi zongezo, qiniseka ukuba uthenga kuphela ukuthembeka umxhasi wegalikhi.
8. Ungawuthengaphi umgubo weGarlic Extract Pow Bulk?
Eyona ndlela ilungileyo yokugcina imali kwiigalikhi ezikhutshiweyo kukuba uzithenge ngobuninzi. Ukuzithenga nganye nganye kunokuba neendleko kwaye kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kungathatha iiveki okanye iinyanga ezininzi zokuthatha izongezo ngaphambi kokuba ubone iziphumo.
Kwakhona, xa wena thenga igarlic ekhuphe umgubo ngobuninzi, qiniseka ukuba ujongana kuphela nomthengisi onyanisekileyo.
Yonke into ekufuneka uyazi: I-Urolithin A, B kunye ne-Urolithin A-8-Methyl Ether
Yonke into odinga ukuyazi malunga nokukhutshwa kwe-Tribulus terrestris
© Copyright-2020- Isayensi